Shina mpanamboatra boky vita pirinty vita pirinty vita amin'ny fiainana an-trano any Sina Fanontana fahalalana
Anaran'ny vokatra: pirinty boky miloko marevaka miloko marevaka
Material: coated paper, offset taratasy ary / na tabila-fotsy
Famaranana ny atiny: lamination matte
MOQ: dika 500 ho an'ny baiko mahazatra
1) Boky mialoha mialoha
Ho azonao ny boky rehetra namboarinao mialoha fa tsy ny fomba fiasa eo am-bidy, izay tsy an-tsoratra ny boky mandra-pamidy. Noho izany, midika izany fa afaka manana kopia amin'ireo boky ireo ianao hamidy amin'ireo mpividy tsy fantatra.
1) Fivarotana mialoha ny famatsiam-bola mialoha ny fampiasam-bola
Rehefa mampiasa boky vita an-tsoratra fohy, ny mpanoratra dia tsy maintsy manafatra ireo boky alohan'ny hamarotana azy ireo. Midika izany fa raha tsy mivarotra ilay boky dia mety ho tompon'andraikitra ny fividianana voalohany.
2) Manaova safidy tsara indrindra
Ny boky vita pirinty fohy dia matetika ampiasain'ny mpanoratra taloha sy ny fikambanana kely misy mpamaky voafetra. Tsara ihany ho an'ny famakiana dika mialoha sy fanontana voafetra. Ity fomba fiasa ity dia manome safidy tsy dia misy atahorana loatra, ahafahan'ny boky tsy misy aorian'ny fanontana navoakan'ny mpanoratra maro samihafa.
Etazonia, Canada, Mexico, Australia, Eropa, Azia Atsimoatsinanana, Rosiana, Japana, Moyen Orient, Afrika, Amerika Atsimo, sns.
Aza adino raha tsy mivarotra boky vita sy tahiry rehetra izahay. Manolotra serivisy fanontana fandefasana izahay ary mila rakitra PDF vetaoro izahay. Mba hanomezana vidiny marina, mila fantarintsika ny haben'ny bokinao, ny haben'ny pejy ao anatiny, ny lokon'ny rakotra ary ny anatiny, sns.
Ny habetsahanay pirinty matetika dia 8.5 * 11inch, 8.5 * 5.5inch, 8.5 * 8.5inch, 8 * 8inch, 7 * 7inch, 6 * 9inch, sns.
Raha toa ny safidy tsara ny fanaovana pirinty boky fohy, na raha mbola tsy azonao antoka ny lalana haleha dia aza misalasala mifandray amin'ny Ball Media Group. Ny orinasa dia manana traikefa be dia be amin'ny fanaovana pirinty boky, ary koa ireo serivisy haino aman-jery maro hafa toy ny famokarana horonantsary sy fampandrosoana ny tranonkala.
Lasa manam-pahaizana izahay amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny famokarana boky amin'ny alàlan'ny fanontana fohy, ary ho faly izahay hanampy anao na inona na inona dingana efa ao anatin'izany amin'izao fotoana izao. Mifandraisa aminay anio!
Previous: Boaty fonosana sarin-doko
Manaraka: Fandokoana boky fametahana boky ho an'ny olon-dehibe